Nwa osisi Teacup Na-ere - Teacup Tiny, Toy, Miniature Puppy
Acmụ Anụmanụ Teacup Na-ere, Teacup na Obere nwa nkịta maka nkuchi na nnapụta
Acmụaka Na-ahụ Maka Teacup Na-ere, Nkuchi na Nnapụta
Nlekọta Anya Nkịta maka Nkịta ma ọ bụ cat gị
Teacup Chihuahuas maka ọrịre, nnapụta, nkuchi
Obere ụmụ nkịta maka ọrịre, nnapụta, nkuchi
Nwa nkịta Cockapoo maka ọrịre, nnapụta, nkuchi
Labradoodle ụmụ nkịta na-ere ere, nnapụta, nkuchi
Nwa nkịta dị ọnụ ala maka ịre ere, nnapụta, nkuchi
Nwa Morkie Na-ere, Napụta, Nkuchi
Pet Friendly Hotels Maka Ezumike
Nkịta Ehi Na-amalite Site A
Ehi nkịta nke bido na B
Nwa nkịta maka nnapụta, Blog nkuchi
Nwa nkịta Teacup na Alabama
Nwa nkịta Teacup na Alaska
Nwa nkịta Teacup na Arizona
Nwa nkịta Teacup na Arkansas
Nwa nkịta Teacup na California
Nwa nkịta Teacup na Colorado
Nwa nkịta Teacup na Connecticut
Nwa nkịta Teacup na Delaware
Nwa nkịta Teacup na Florida
Nwa nkịta Teacup na Georgia
Nwa nkịta Teacup na Hawaii
Nwa nkịta Teacup na Idaho
Nwa nkịkpo Teacup na Illinois
Nwa nkịta Teacup na Indiana
Nwa nkịta Teacup na Iowa
Nwa nkịta Teacup na Kansas
Nwa nkịta Teacup na Kentucky
Nwa nkịta na-akpọ Teacup na Louisiana
Nwa nkịta Teacup na Maine
Nwa nkịta Teacup na Maryland
Ụmụ nkịta Teacup na Massachusetts
Nwa nkịta Teacup na Michigan
Nwa nkịta Teacup na Minnesota
Nwa nkịkị nke Teacup na Mississippi
Nwa nkịta Teacup na Missouri
Nwa nkịta Teacup na Montana
Nwa nkịta Teacup na Nebraska
Nwa nkịta Teacup na Nevada
Nwa nkịta Teacup na New Hampshire
Nwa nkịta Teacup na New Jersey
Nwa Nkịtị na New Mexico
Nwa nkịta Teacup na New York
Nwa nkịta Teacup na North Carolina
Nwa nkịta Teacup na North Dakota
Nwa nkịta Teacup na Ohio
Nwa nkịta Teacup na Oklahoma
Nwa nkịta Teacup na Oregon
Nwa nkịta Teacup na Pennsylvania
Nwa nkịta Teacup na Rhode Island
Nwa nkịta Teacup na South Carolina
Nwa nkịta Teacup na South Dakota
Nwa nkịta Teacup na Tennessee
Nwa nkịta Teacup na Texas
Nwa nkịta Teacup na Utah
Nwa nkịta Teacup na Vermont
Nwa nkịta Teacup na Virginia
Nwa nkịta Teacup na Washington
Nwa nkịta Teacup na West Virginia
Nwa nkịta Teacup na Wisconsin
Nwa nkịta Teacup na Wọwik
Pịnye ọchụchọ gị
Nwa osisi Teacup na-ere ere, Teacup, obere ihe ụmụaka na obere ụmụ nwamba maka nkuchi na nnapụta si na steeti iri ise niile. Gụnyere Yorkie, Chihuahua, Morkie, Maltese, Poodle, Labradoodle, Cockapoo, Maltipoo, Pomeranian, Shih Tzu, Blue Sable French Bulldog, Heeler, Chow Chow Dog na ndị ọzọ. N’okpuru, ị ga - ahụ ihe ntụpọ Breed na ọtụtụ Teacup, Miniature, na Mini Dog Breeds. Anyị etinyela ọtụtụ ozi iji nyere gị aka n'ọchịchọ gị maka ezigbo onye ezinaụlọ gị.
Teacup ụmụ nkịta maka ọrịre na Alabama AL
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta nọ na Alabama, AL.
Nkịta ndị a nwere ike ịdị obere, mana ha nwere ụdị mmadụ kachasị atọ ụtọ. Ejiri Yorkshire nke na-aba n'akpa uwe nwere ike ịnya n'ime obere akpa ma mee nkịta ụkwụ zuru oke. Ha na-eme mkpọtụ n'oké mkpọtụ ma nwee ike ịdị ndụ 12-15. Hà dị iche iche mana ihe 2-5 lbs dị mma maka ogo izizi.
Teacup Puppies maka ọrịre na Alaska AK
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Alaska, AK.
Obere nkuzi Chihuahua bu obere nkita. Ha nwere ike dị obere ka 2 ruo 4 lbs ma bụrụ ndị a na-atụle ịkụzi. Ha na-agbari karịa ụdị ndị ọzọ ma nwee ike ịbụ nkịta na-abụkarị otu onye. Ọ na-amasịkarị ị cudụ mmanya na ime nkịta ukwu. Soro ezinụlọ gị nyochaa ha n'oge ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. Rscha gụnyere agba ojii, ọcha, ụja, ude, chọkọleti, ọla edo na ọtụtụ ọdịiche ndị ọzọ gụnyere igwekota na ụdị a na-abia na ụdị ntutu ogologo ogologo na nke mkpụmkpụ.
Nwa nkata maka Teacup na Arizona AZ
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta nọ na Arizona, AZ.
Pom na-akụzi ihe bụ ntakịrị nkịta, na-arụ ọrụ ma dị oke ọnụ ahịa. Ha na-acho itule nari abuo na ise ka aga-ahuta nha izipu ihe. Ha na-abata n'ọtụtụ agba dị iche iche gụnyere acha ọbara ọbara, oroma, ọcha ma ọ bụ ude, acha anụnụ anụnụ, aja aja, oji na ndị ụfọdụ nwere akụkụ ahụ. Ha bụ ihe jupụtara ebe niile, nwee omume enyi ma nwee mmega ahụ dị ka ụdị ọzọ.
Nwa nkịta Teacup na-ere n'ahịa Arkansas AR
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta nọ na Arkansas, AR.
Dị a bụ mgbanwe dịgasị iche nke Poodle. A na-akpọkwa Toy Poodle. Ha na-abụ ezigbo enyi maka ndị mmadụ n'otu n'otu na ezinụlọ. Onye nwere ọgụgụ isi, ịhụnanya, ntụkwasị obi na mmekọrịta. Ha na-abata n'ọtụtụ agba gụnyere ojii, ọla ọcha, acha anụnụ anụnụ, isi awọ, aprịkọt, beige, aja aja, ọbara ọbara na ọcha. Ha na-adịkarị sentimita iri ma ọ bụ pere mpe, na-erubeghị kilogram 10 n’arọ ka ha ga-atụle ka ịkụzi ma ọ bụ nke ụmụaka ji egwuri egwu.
Nwa nkịta Teacup na-ere ere na California CA
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na California, CA.
Maltese nke kuziri nkuzi a bu aha enyere ndi pere mpe ahu. Ha na-egwuri egwu ma jupụta n'ike ruo mgbe ụra dịịrị. Bredị a na-eme nkịta akwa ụkwụ ma nwee ike iburu ha na obere akpa gị ma ọ bụrụ na pere mpe. Ha na-ebi ndụ dị mma obibi mana ha na-echeta ụdị ụmụaka chọrọ mmega ahụ. Ndị Maltese na-akụzi ihe na-adị n'etiti 2 na 4 lbs.
Nwa osisi Teacup na-ere ahịa na Colorado CO
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke Dog Breeders na ụlọ ọrụ nnapụta na Colorado, CO.
Nkịta ngwakọ a na-akpụzi akpụpụta sitere na ịzụrụ Poodle na Maltese. Maltipoo nke nkuzi ahụ dị nro ma nwekwaa mmetụta, amaara ka ọ bụrụ nkịta ezinaụlọ ukwu ma nwee ike zụọ ha ịbụ nkịta ọgwụgwọ n'ihi ọnọdụ dị mma. Agba bụ ọla ọcha, ojii, ọcha, ude ojii, isi awọ, agba aja aja na ihe ndị ọzọ. A na-atụle ogo 8 ruo 14 n'ogo na 5 ruo 15 lbs n'obosara ịkụkụ.
Nwa nkịta Teacup na-ere na Connecticut CT
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Connecticut, CT.
Minidị obere a na-eche iru na 7 lbs ka a ga-atụle nha ọzụzụ. Ha na-elezi anya nke ọma ma nwee mmasị n'ịgba egwu na ikpori ndụ. Ha na-achọ ịmata ihe ma na-amụ anya ma ha na-emekwa akwa ukwu ma ọ bụ nkịta akwa. Rscha gụnyere acha ọcha, nnu na ose, ojii nwere akara ọcha, ọla ọcha platinum, ose imeju, oji na ọla ọcha, chọkọleti ma ọ bụ imeju na ọtụtụ ndị ọzọ. Obere ụdị a chọkwara mmega ahụ na nlekọta ọfụma kwesịrị ibi ndụ ogologo oge 12-14.
Nwa osisi Teacup na-ere na Delaware DE
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Delaware, DE.
Morkie bụ onye nrụpụta ma ọ bụ ngwakọ nke emepụtara site na ịhapụ Maltese na Yorkshire Terrier. Ebe ụdị anụ ahụ buru ibu, ụdị nkuzi a na-esite n’inye ụmụ obere ụmụaka. Iri Teacup na-abụ 3 ruo 5 lbs. Ha na-eme nkịta nkịta ụkwụ mara mma ma nwee mmasị igwu egwu na ịgba gburugburu. Ọ dị mma maka ụmụaka na ezinụlọ na-enye onwe ha nke ọma mgbe ha mụrụ ha. Colorsfọdụ agba gụnyere ojii, agba aja aja, oji na ọcha, ọla edo na oji na ọla edo. O pere mpe na-ebu na obere akpa ma nwee egwuregwu zuru ezu maka obere ije.
Nwa Nkịtị maka Teacup na Florida FL
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke Dog Breeders na ụlọ ọrụ nnapụta na Florida, FL.
Bredị a dị obere na-enweta oge nkuzi ahụ site na ịnọ na ogo 10-14 lb. Igwe dị elu dị sentimita 11-12. Ndi Frenchie nwere ugwu na ike isi ike mana otutu choro ihu n'anya na ihu. Ha na-abịa n'ọtụtụ agba gụnyere lilac, chocolate, acha anụnụ anụnụ na nwa, nwa, sable, acha anụnụ anụnụ, nwa na tan na ndị ọzọ. Ha bu nkpuru di ndu nke kwesiri mmeghari kwa ubochi. Walkszọ dị mkpirikpi n'ime ogige ma ọ bụ na-egwuri egwu n'ime ụlọ bụ nnukwu echiche. Ha hụrụ n'anya na-egwuri egwu ụmụaka na dị ka ọ bụla ụdị, ị kwesịrị ị na-eleta veti gị kwa ọnwa maka nnyocha.
Nwa osisi Teacup na-ere ere na Georgia GA
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Georgia, GA.
Nwa nkata Teacup na-ere ere na Hawaii HI
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Hawaii, HI.
Nwa nkịta Teacup na-ere ere na Idaho ID
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Idaho, ID.
Nwa nkata Teacup na-ere na Illinois IL
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta na ndị otu nkpọkọ na Illinois, IL.
Teacup Puppies maka ọrịre na Indiana IN
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Indiana, IN.
Nwa nkata Teacup na-ere Iowa IA
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Iowa, IA.
Teacup nwa nkịta maka ọrịre na Kansas KS
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke Dog Breeders na ụlọ ọrụ nnapụta na Kansas, KS.
Teacup ụmụ nkịta maka ọrịre na Kentucky KY
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Kentucky, KY.
Nwa nkịta Teacup na-ere ere na Louisiana LA
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Louisiana, LA.
Nwa osisi Teacup Na-ere na Maine ME
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Maine, ME.
Teacup ụmụ nkịta maka ọrịre na Maryland MD
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Maryland, MD.
Nwa osisi Teacup na-ere ahịa na Massachusetts MA
Nwa nkịta na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Massachusetts, MA.
Teacup ụmụ oke maka ọrịre na Michigan MI
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta sitere na ndị nkịta na ndị nkịta na-anapụta ụmụ mmadụ na Michigan, MI.
Teacup nwa nkịta maka ọrịre na Minnesota MN
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke Dog Breeders na ụlọ ọrụ nnapụta na Minnesota, MN.
Nwa osisi Teacup na-ere na Mississippi MS
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Mississippi, MS.
Nwa osisi Teacup na-ere ere na Missouri MO
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Missouri, MO.
Nwa nkata Teacup na-ere ere na Montana MT
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Montana, MT.
Nwa Nkịtị maka Teacup na Nebraska NE
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Nebraska, NE.
Teacup ụmụ nkịta maka ọrịre na Nevada NV
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Nevada, NV.
Teacup nwa nkịta maka ọrịre na New Hampshire NH
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke Dog Breeders na ụlọ ọrụ nnapụta na New Hampshire, NH.
Teacup ụmụ nkịta maka ọrịre na New Jersey NJ
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na New Jersey, NJ.
Nwa nkịta Teacup na-ere ere na New Mexico NM
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na New Mexico, NM.
Teacup nwa nkịta maka ọrịre na New York NY
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na New York, NY.
Nwa nkata Teacup na-ere ere na North Carolina NC
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta nọ na North Carolina, NC.
Teacup ụmụ nkịta maka ọrịre na North Dakota ND
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta na ndị nnapụta nkịta na North Dakota, ND.
Teacup nwa nkịta maka ọrịre na Ohio OH
Teacup ụmụ nkịta na nkịta maka nkuchi na nnapụta sitere na Dog Breeders na ụlọ ọrụ nnapụta na Ohio, OH.
Teacup Puppies maka ọrịre na Oklahoma OK
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Oklahoma, OK.
Nwa nkata Teacup na-ere ere na Oregon MA
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Oregon, OR.
Teacup nwa nkịta maka ọrịre na Pennsylvania PA
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Pennsylvania, PA.
Nwa nkịta Teacup na-ere ahịa na Rhode Island RI
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Rhode Island, RI.
Nwa nkata maka Teacup na South Carolina SC
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta nọ na South Carolina, SC.
Nwa nkata maka Teacup na South Dakota SD
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta sitere na Dog Breeders na otu mgbapụta nọ na South Dakota, SD.
Teacup ụmụ nkịta maka ọrịre na Tennessee TN
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta sitere na ndị nkịta na ndị na-anapụta nkịta na Tennessee, TN.
Nwa nkata Teacup na-ere na Texas TX
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Texas, TX.
Nwa nkịta Teacup na-ere na Utah UT
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Utah, UT.
Nwa nkịta Teacup na-ere ahịa na Vermont VT
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Vermont, VT.
Teacup Puppies maka ọrịre na Virginia VA
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke Dog Breeders na ụlọ ọrụ nnapụta na Virginia, VA.
Nwa nkịta Teacup na-ere ahịa na Washington WA
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Washington, WA.
Nwa nkịta Teacup na-ere ere na West Virginia WV
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na West Virginia, WV.
Teacup Puppies maka ọrịre na Wisconsin WI
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Wisconsin, WI.
Teacup ụmụ nkịta maka ọrịre na Wyoming WY
Nwa nkịta Teacup na Nkịta maka nkuchi na nnapụta nke ndị nkịta nkịta na ụlọ ọrụ nnapụta na Wyoming, WY.
Gịnị na-eme ka nwa nkịta na-akụzi ihe?
Dị ka American Kennel Club gosiri, a pụrụ ịtụle canines dị ka “onye nkuzi” ma ọ bụrụ na ha tụọ ihe dị ka kilogram abụọ na ise, ma tụọ ihe na-erughị sentimita asatọ mgbe etolitela kpamkpam.
Ọzọkwa, ụdị “ihe ụmụaka ji egwuri egwu” na-ejikwa ụgbọ mmiri ọ bụla na-eru kilogram 15, yabụ, enwere ike ilele pooch na-akụzi ihe dị ka nnukwu akụkụ nke "ihe egwuregwu", yana
Ruo n’ogo ole ka ụmụ nkịta na-akụzi ihe na-ebi?
Na ohere ọ bụla ị mere nyocha gị nke ọma ịchọpụta izizi gị, ị ga-ejikọ aka ruo afọ 15.
Obere obere ka ga-adị ogologo karịa ụdị buru ibu, na mgbe ọ bụla enyere gị ọgwụgwọ kacha mma, ị ga-ahụ ihe ga-eme ka ndụ gị maa mma.
Ego ole ka ụmụ nkịta na-azụ?
N'ihi nke a, a na-akpọ ndị a pọọlụ “nkuzi” ma erekwa ha mgbe niile na oke ike.
Ego ole ka nkịta na-azụ ihe bara nnukwu ọnụ?
Ego nwa nkịta na-akụzi ihe nwere ike ịgbanye ebe ọ bụla na $ 750 na $ 2,000!
Have ga-ejekwuru nwa nkịta na-akụzi ihe?
Rollingchịkwa obere nkịta na-akụzi ihe dị nnọọ mkpa dị ka ịchịkwa ụdị akwara ọzọ.
Ebumnuche dị mkpa na nke a bụ nwatakịrị a n'agbanyeghị ihe niile chọrọ kwa ụbọchị ikuku.
Ọ bụ ezie na ijikwa ya enweghị ike iche na iwere ya na akari, ọ ka ka achọrọ.
Gịnị bụ ihe nkịta ịkụzi ihe kachasị nkọ?
N'agbanyeghị nha (Teacup, Toy, Standard, Giant), Poodle ìgwè bụ nke ama dị ka otu n'ime ụdị oke egwu mara mma nke na - emegharị ụwa taa.
Ego ole ka izizi ị na-enweta?
Informally, nwa nkita na-akuzi ihe bu ihe ojoo emere n'ime onwa ato ma o buru odibo na iri na asaa.
Ha na oke 4 pound ma ọ bụ obere na mmepe.
Ka o sina dị, onweghi onye achọrọ ka o buru ibu ebe ọ bụ na ụmụ nkịta anaghị akụzi ihe ma ọ bụ ikike ịchị achị.
Kedu ihe nkuzi na-eto eto chọrọ?
Ekwesịrị ka a gbaa ndị na-eto eto ume ume ka ha rie nri bara ụba.
Chọọ maka nri mkpọ ma ọ bụ ala akọrọ nwere ihe ndozi dịka akwa, ọkụkọ, ngwaahịa eke, veggies, na omega 3 nke abụba na-anaghị eju afọ.
N'otu aka ahụ, hụ na nri na-edozi ahụ ị na-enye nwere Karo syrup.
Teacup na-eto eto doggies na-achọkarị glucose dị ala ma ndozi a nwere ike inye aka mezie nke ahụ.
Ngwakọta ịkụ azụ na-emebi nnukwu ọrụ?
Were nwa mgbere ụmụ mmadụ, ị ga - achọpụta isi mmalite nkwalite ahụ nke gbara ụmụ obere nkuzi ume ka ọ daa nnukwu ọrụ na ọ bụghị ụmụ nkịta niile na-akụzi ihe na-akụ nnukwu mmiri.
Ọ bụ mmadụ ole na ole kụrụ ntu n’isi — ọ bụghị ihe gbasara ìgwè, ma ọ bụ nha nke canine.
Na ohere gbanyụrụ na ịchọrọ ịnwe nwa nkịta dị jụụ, dị jụụ, mee ka ha nọrọ jụụ ma nwee ebe obibi.
Kedu obere ụgbọ mmiri ndị na-enweghị mgbali iji gwọọ ụlọ?
Schnauzers pere mpe karịa ka enwere ike bụ otu n'ime ụdị anụ ọdịmma pereus na oke housetrain.
Ole na-eto eto nwatakịrị ga-akụrịrị ala mgbe ha na-apụ n'ụlọ onye na-abara ya mba, o doro anya na ọ bụrụ na ị gbanwee usoro nkwadebe (iji cushions kama ahịhịa, dịka ọmụmaatụ) ọ ga-egbochi pooch ntakịrị.
Ntuziaka na-agba ume:
N'ihi ịkụzi okwu nkịta, obere ụmị na ikike dị elu iji kpọọ calorie ọkụ, ọ dị mkpa iri obere obere na ụzọ ikuzi ihe karịa ugboro ole na ole kwa ụbọchị.
Ha kwesiri iri nri oge obula n'ime 4-5 NA LEAST na maka abughi ihe odi nkpa nke umuaka. Ha kwesiri iri nri n’ime awa 3-4 ọ bụla.
Kedu ụdị ụmụ nkịta nkuzi ole dị?
Ebe o bu na umu agbogho Teacup erughi oke etu AKC di maka udiri ihe eji egwuri egwu, i nwere ike, n’ezie inwe udiri obula ana akpo nkuzi.
Ihe ọtụtụ ndị na-azụlite na-ewere dị ka Teacup bụ pooch na-eru n'okpuru 4 pound na-anọ n'okpuru 17 sentimita asatọ.
Site na akara ndị a, enwere naanị isii ezigbo Teacup.
Kedụ ihe ị na-enye n’aka nwata ji akụzi ihe?
Ekwesịrị ka agba Teacup kwesịrị ịkwado iri nri bara ụba.
Chọọ maka nri mkpọ ma ọ bụ ala akọrọ nwere ihe ndozi dị ka àkwá, ọkụkọ, ngwaahịa bekee, veggies, na omega 3 nke abụba anaghị eju afọ.
Na mgbakwunye, hụ na nri mkpụrụ ị na-ahọrọ nwere nwere Karo syrup.
Ibe Teacup na - achọ glucose dị ala ma ndozi a nwere ike inye aka belata nke ahụ.
N'oge a ọtụtụ ndị na-azụ nkịta, nnapụta na nchekwa ga-ebuga na steeti ndị a: Alabama AL - Alaska AK - Arizona AZ - Arkansas AR - California CA - Colorado CO - Connecticut CT - Delaware DE - Florida FL - Georgia GA - Hawaii HI - Idaho ID - Illinois IL - Indiana IN - Iowa IA - Kansas KS - Kentucky KY - Louisiana LA - Maine ME - Maryland MD - Massachusetts MA - Michigan MI - Minnesota MN - Mississippi MS - Missouri MO - Montana MT - Nebraska NE - Nevada NV - New Hampshire NH - New Jersey NJ - New Mexico NM - New York NY - North Carolina NC - North Dakota ND - Ohio OH - Oklahoma OK - Oregon OR - Pennsylvania PA - Rhode Island RI - South Carolina SC - South Dakota SD - Tennessee TN - Texas TX - Utah UT - Vermont VT - Virginia VA - Washington WA - Washington, DC - West Virginia WV - Wisconsin WI - Wyoming WY - Ewela iwe na anyị ebupughị Hawaii HI.
Teacup China Ejiri,
Teacup Ezigbo Fox Terrier,
Teacup Waya Fox Terrier,
Teacup Bekee Bulldog,
Obere nwa nwoke nke America,
Obere Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia,
Obere Olde English Bulldogge,
Obere onye German na-azụ atụrụ,
Obere Shiba Inu,
Obere Border Collie,
Obere French Bulldog,
Obere bekee bekee Bulldog,
Obere obere poodle,
Obere Yorkie Poo,
Obere Lhasa Apso,
Obere Bichon Frize,
Obere mini Cockapoo,
Obere Shih Tzu,
Obere Cavalier King Charles Spaniel,
Obere Yorkshire Terrier,
Obere Brussels Griffon,
Obere obere minipaị pinch,
Obere onye Italian Greyhound,
Alaskan Klee Kai nke Obere,
Obere eku oke,
Obere Russian Tsvetnaya Bolonka,
Obere English Cocker Spaniel,
Obere Oke Ogwe,
Obere ihe maka Boston Terrier,
Obere Cairn Terrier,
Obere Cocker Spaniel,
Obere Jack Russell Terrier,
Obere Norwich Terrier,
Obere Pembroke Welsh Corgi,
Obere Scottish Terrier,
Obere Shetland Sheepdog,
Obere silky Terrier,
Obere anụ ahụ dị nro nke Fox,
Obere West Highland White Terrier,
Obere Wire Fox Terrier,
Obere English Bulldog,
Obere Mini pincher,
Obere Italian Greyhound,
Obere Alaskan Klee Kai,
Obere Oke Oke
Obere Japanese Japanese,
Obere Oke Oke,
Obere Boston Terrier,
Obere anụ ahụ dị nro Fox,
Obere Wire Fox Terrier
Ozi a dị n’elu bụ inyere gị aka ikpebi ụdị nkịta nwa nkịta, nnapụta nkịta ma ọ bụ ndo nke bụ nke kacha mma maka gị na ezinụlọ gị. Anyị anaghị eso onye ọ bụla edepụtara ya n'ihi ya, ọ dị ezigbo mkpa ka ị mee nyocha nke gị & gbaa mbọ hụ na ọ dabara adaba maka gị na ezinụlọ gị.
Mara Mkpa Gị nye Google, Yahoo, Bing & Ngwa Nchọta Ndị ọzọ:
Edere ndepụta ndị a ebe a n'efu ma bụrụ naanị maka ebumnuche ọhụụ ma anaghị akwụ ụgwọ njikọ.
AKLEKỌ AKW BeKWỌ: Kpachara anya maka ụdị aghụghọ a na-achọ ka ị ziga ego site na ọdịda anyanwụ, gram ego ma ọ bụ Wal-Mart na Wal-Mart. Ndụmọdụ m bụ ka ị chịkọta nwa nkịta gị n'onwe gị ma kwụọ ụgwọ ya. Mgbe niile zukọta na ebe ọha na eze & naanị ịnọ naanị ya. Ọ bụrụ n decide kpebie ime ka nwa nkita ziga, m na-atụ aro ka ọ bụrụ PayPal ma ọ bụ ka ị kwụọ ụgwọ mgbe nwa nkịta ga-anọrọ ya.
Tugharia Asusu na Asusu gi
Peeji ndị kasịnụ
Tozọ Isi Mee Nkpuchi Anya
Etu esi eme aka Sanitizer
Teacup Chihuahuas Ahịa, Nkuchi
Teacup Shih Tzu ụmụ nkịta maka ọrịre, nkuchi
Nwa nkịta Teacup Yorkie maka ịzụ, nkuchi
Nwa nkịta Cockapoo maka ọrịre, nkuchi
Nwa nkịta Teacup Morkie maka orire, nkuchi
Labradoodle Puppy For Sale, Nkuchi
Obere nwa nkita na ere, nkuchi
Nwa Nkịtị Teacup Na-ere, Nkuchi
Nwa nkịta Teacup na-ere na Nkuchi
Copyright - OceanWP Isiokwu site Nick